भुटानी राजा भन्छन म नेपालको प्रसूति गृहमा जन्मेको हुँ मेरो घनिष्ट सम्बन्ध छ…हेर्नुहोस् ।
भुटानका राजा जिग्मे खेसर नाम्गेल वाङचुकले आफू नेपालमा जन्मेको बताएका छन् । भुटानका लागि गैर आवासीय राजदूत निलाम्बर आचार्यसँगको संक्षिप्त भेटमा राजा जिग्मेले आफू नेपालमा जन्मेको र नेपालीसँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताए ।
नेपाल र नेपाली जनतासँग मेरो निकट सम्बन्ध छ । भावनात्मक सम्बन्ध छ । किनकी म नेपालमा जन्मेको हो’, राजाको भनाई उद्धृत गर्दै राजदूत आचार्यले भने । राजा जिग्मेले नेपाल र भुटानबीच गहिरो सांस्कृ’तिक सम्बन्ध रहेको र दुबै देश भूप’रिवेष्ठित रहेकाले मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
राजदूत आचार्यले भुटानी प्रधानमन्त्री डा. लोटे टिसिरिङ्गसँग पनि भेट गरेका थिए । भेटमा नेपाल र भुटानको ऐतिहासिक सांस्कृ’तिक समानता तथा नेपाल सरकारकाे भ्रमण वर्ष २०२० काे प्र’वर्द्धन बारे छलफल भएको थियो ।
Previous भोली एमसीसीको पास नहुने भए पछि नेपाललाई अमेरिकाको यस्तो चे तावनी…हेर्नुहोस !
Next हावाबाट पनि कोरोना सर्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी डब्ल्यूएचओले स्वीकार्‍यो, अनुसन्धान जारी…हेर्नुहोस् ।